araka ny fitorian’ny fianakavian’ny mpianatra iray namono tena. Ny ampitson’ny fetin’ny mpifankatia teo, nisy zazavavy 12 taona narary tao am-pianarana ka nitambotsotra tampoka ary voatatin’ny mpampianatra azy. Nifanampy nitondra azy tany amin’ny hopitaly ilay mpampianatra, ny namany, ny talen-tsekoly, ny mpiambina sy ny dadatoan’ilay tsy salama ary ny zokiny vavy 14 taona. Ny rainy kosa efa maty ary ny reniny taty an-drenivohitra. Mpiambina iray ihany anefa no ilaina araka ny toromariky ny mpitsabo ka ny dadatoany sisa niandry marary. Tsy tana anefa ny ain’ilay mpianatra ny ampitso sabotsy maraina tamin’ny dimy ora. Nandeha nitsapa alahelo ny tale mivady sy ny mpampianatra ary ny solontenan’ny ray aman-dreny. Voatoroka ho tsy nandray andraikitra ireo ankohonam-panabeazana ka niakatra fitsarana ny 10 mey saingy tsy nazava ny taratasin’ny mpitsabo ka nahemotra ny 7 jona teo indray, nefa nalefa nody noho ny fisalasalana. Ny tale izay voapanga ho tsy nandray andraikitra sy ny mpampianatra iray izay voarohirohy namoaka ny fiheverana ho famonoan-tena tamin’ny tambajotran-tserasera sisa tratra farany notorian’ny fianakavian’ny lasibatra. Ireo mpianatra telo nijoro vavolombelona tamin’ny fanadihadian’ny polisy, notronin’ny ray aman-dreniny nilaza fa voatantin’ny mpanabe ilay nitolefika tao am-pianarana, ary niteny ity farany fa hanaraka ny dadany izay efa maty ka nihinana vaingam-panafody. Ny 9 jolay izao ny fotoam-pitsarana.